Home Wararka Musharaxiinta Madaxweynaha oo si isdaba joog ah uga baxaya dalka! Waa maxay...
Musharaxiinta Madaxweynaha oo si isdaba joog ah uga baxaya dalka! Waa maxay sababta?
Waxaa maalmihii u danbeeyay magaalada Muqdisho ka sii baxayay Musharaxiinta u tartamaysa jagada Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya.
Safarka iyo kala cararka Musharaxiinta ayaa ku soo aadaya iyada oo ay ahayd asbuuc ka hor markii heshiiskii doorashada la saxiixay. Hadaba dad badan waxa ay isweydiinayaan maxaa keenay in laga cararo dalka xili doorashadii la iclaamiyay.
MOL oo u kuurgashay sababta keentay kala cararka Musharaxiinta ayaa ogaatay in Musharaxiinta intooda badan ka cararayaan in ay lacag weydiistaan Xildhibaanada tartanka ugu jiro kuraasta Xildhibaanada iyo Sanadkaan.
Qaar badan oo kamida Musharaxiinta ayaa intooda badan waxa ay tartanka ugu jiraan magac raadin iyo in lagu tilmaamo musharax madaxweyne inkastoo hamigoodu yahay wasiir, halka qaar kale oo rajo ka qabtay in ay lacag ka helayaan wadamo shisheeye ay meel cidla ah ku soo dhaceen markii loo sheegay in aan lacag loo haynin.
Qaar kamida Musharaxiinta ayaan intooda ku marmaraiyoon doona in ay lacag soo raadinayaan taas oo ah qancin ay ku qancinayaan taageerayaashooda.
Maalmaha soo socda ayaa Musharaxiinta ay dalka soo firaaqayn doonaan dhamaantood.